theZOMI: Burma News International - April 5, 2013
Burma News International - April 5, 2013
The secretary general of the Organization of Islamic Cooperation (OIC) declared they are “ready to take all necessary measures and actions” in dealing with the impending crisis affecting Muslims in Burma, according toapress release fromagroup meeting held in Jeddah, western Saudi Arabia, on March 30.
The race for Myanmar's telecoms networks got even hotter on Thursday when the creation of two powerhouse consortia was announced at the closing of the pre-qualification round for two network licenses.
The Shan Sapawa Environmental Organization has accused Myanmar military forces of “stoking war” in Shan State by giving an ultimatum to the Shan State Army-North (SSA-N) to clear troops from the banks of the Salween River to make way foraChinese-backed mega dam.
Singapore ramps up investment in Myanmar
Singapore will openaYangon Overseas Centre to encourage growing trade and investment in Myanmar. The announcement was made at the Singapore-Myanmar Business Forum on Thursday where three agreements and two Memoranda of Understanding (MoUs) were signed by Singaporean companies across various industries, including telecoms and hospitality.
တရုတ်ပိုက်လိုင်းများ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် ရှမ်းတောင်သူများနှင့် ရှမ်းလူထုအဖွဲ့များ တောင်းဆို
ရှမ်းပြည်နယ်မြောင်ပိုင်း ဖြတ်သန်းထားသော ဓါတ်ငွေ့ ပိုက်လိုင်းများကို ပြောင်းရွှေ့ပေးရန် မြောက်ပိုင်း ရှမ်း တောင်သူလယ်သမား ကော်မတီနှင့် ရှမ်းလူထုအခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများက သောကြာနေ့တွင် တောင်းဆိုလိုက်ကြသည်။
စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအား ကူညီထောက်ပံ့ရန် သျှမ်း/မြောက်ပိုင်း၌ ငွေ နှင့် ပစ္စည်းများကောက်ခံစုဆောင်း
သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တန့်ယန်းမြို့အတွင်း မတ်ခ်ျလနှောင်းပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့သည့် မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် SSPP/SSA တို့အကြား တိုက်ပွဲကြောင့် မြို့ပေါ် ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၌ ခိုလှုံနေကြရ သည့် ကျေးလက်လူထုများအား SNLD နှင့် သျှမ်းလူငယ်အဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ ကူညီထောက်ပံ့မှုများသွားပေး မည်ဟု သျှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းသတင်းရပ်ကွက်ကဆိုပါ သည်။
Last Updated on သောကြာနေ့၊ ဧပြီလ 05 ရက် 2013 ခုနှစ်
ဖားအံက ခြံမြေအငြင်းပွားမှု ကရင်ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ် ကြားဝင်ဖြေရှင်းပေး
ကရင်ပြည်နယ်၊ဖားအံမြို့နယ်၊ လှာကမြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြိုင်သာယာကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ခြံမြေပိုင် ဆိုင်ခြင်း အငြင်းပွားမှုများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးရန်ဒေသခံများ၏ တိုင်ကြားတောင်ဆိုမှုအပေါ် ကရင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ လွတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းစေအွာက ယမန်နေ့တွင် ဒေသခံများနှင့်သွားရောက် ဆွေးနွေး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပိဋကတ်တော် ကျမ်း (၅) ကျမ်းအား ပါဠိ မှာ မွန်သို့ ဘာသာပြန်ပြီး
ယခုလ ၃ ရက်နေ့တွင် မွန်ပြည်နယ်၊ သံဖြူဇရပ်မြို့တွင် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပါဠိ ပိဋကတ်တော် ကျမ်း (၅) ကျမ်းကို မွန်ဘာသာသို့ ဘာသာပြန် ပြီးစီး၍ လှည့်လည် ပူဇော်ခံခဲ့ကြောင်း ပါဠိ ပိဋကတ် တော်မွန်ဘာသာပြန် အဖွဲ့ချုပ် သန္တိသုခကျောင်းတိုက် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တ သုနန္ဒ က မိန့်သည်။
လားရှိုးမြို့၌ ဒုအကြိမ်မြောက် သျှမ်းစာပေဆရာအတတ်သင် သင်တန်းဖွင့်လှစ်
သျှမ်းစာပေ ဆရာအတတ်သင် သင်တန်းကို သျှမ်းစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုမှ ကမကထပြုပြီး Kham Ku Center for Study and Development ၏ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုဖြင့် သျှမ်းပြည်မြောက် ပိုင်း လားရှိုးမြို့၌ ဒုတိယ အကြိမ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့ပါသည်။
တောင်းဆိုချက်များ မလိုက်လျောက တရုတ်ကုမ္ပဏီကို မဒေးကျွန်းသားများ ဆန္ဒပြမည်
ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရေး အပါအဝင် တောင်းဆိုချက်များကို လိုက်လျောခြင်း မရှိပါက တရုတ် CNPC ရေနံကုမ္ပဏီအား ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မဒေးကျွန်း ဒေသခံများက ဧပြီလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ဆန္ဒပြ မည်ဖြစ်ကြောင်း မဒေးကျွန်း ဒေသဖွံ့ရေး အသင်းက ပြောဆိုလိုက်သည်။
အစိုးရနှင့်ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ကြား တင်းမာမှုကြောင့် လုံခြုံရေးတင်းကြပ်ထားသော ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့တွင် ယခုချိန် တင်းကြပ်မှုများလျော့လာပြီး ညတွင်လွပ်လပ်စွာပြန်လည်သွားလာခွင့် ရနေပြီဖြစ် ကြောင်း မြစ်ကြီးနားဒေသခံများကပြောသည်။